वाटरमार्क हटाउनुहोस्: कार्यक्रम र वेबसाइटहरु यसलाई हटाउन को लागी रचनात्मक अनलाइन
एनकर्नी आर्कोया | | डिजाइन उपकरणहरू
इन्टरनेट एक दोहोरो उपकरण हो। तपाइँ तपाइँको कामहरु लाई ज्ञात बनाउन सक्नुहुन्छ, वा तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरु कसरी उनीहरुलाई चोरी गरीरहेछन् र अरु कसै बाट gettingण लिईरहेछन्। यस कारण को लागी, धेरै कलाकारहरु यो 'चोरी' लाई रोक्न को लागी एक प्रयास मा छविहरु, चित्रहरु र आफ्नो काम को तस्वीरहरु अपलोड गर्न वाटरमार्किंग को सहारा। तर एक पटक कानून बनेपछि जाल बन्छ। र त्यहाँ एक वाटरमार्क हटाउने तरिका हो।
हामीले यो स्पष्ट गर्नु पर्छ कि हामी तपाइँलाई पढाउन जाँदैछौं कसरी वाटरमार्क हटाउन, तर यति हैन कि तपाइँ अर्को व्यक्ति को हानि को लागी जानुहोस्, तिनीहरुको काम चोरी। ती अवस्थामा यो लेखक जो व्यक्ति संग कुरा गर्न को लागी राम्रो छ।
1 वाटरमार्क भनेको के हो?
2 के यो एक वाटरमार्क हटाउन कानूनी छ?
3 कसरी एक वाटरमार्क हटाउन
3.1 वाटरमार्क हटाउने
3.2 PhotoStamp हटाउने
3.3 फोटोशप संग एक वाटरमार्क हटाउनुहोस्
3.5 फोटो प्रभावहरू
वाटरमार्क भनेको के हो?
एक वाटरमार्क यसको अंग्रेजी नाम, वाटरमार्क बाट पनि चिनिन्छ। यो कलाकारहरु को लागी आफ्नो काम को रक्षा को लागी एक उपकरण हो। यो छविको परिचय एक लोगो, छवि, फोटो, पाठ ... को बारे मा छ कि छविको लेखक हो भनेर पहिचान गर्ने बारे मा छ। अर्को शब्दमा, यो लेखक को हस्ताक्षर जस्तै काम गर्दछ ताकि कोहि तपाइँको काम चोरी गर्न सक्दैन।
यी वाटरमार्कहरु लगभग सधैं पारदर्शी वा एक र that्ग छ कि छवि को कि मेल खान्छ को विशेषता हो, पछि, यद्यपि यो दृश्य हुन को लागी इरादा छ, यो बाधा वा तस्वीर को परिणाम लाई प्रभावित गर्न को लागी होइन।
के यो एक वाटरमार्क हटाउन कानूनी छ?
यो भन्दा पहिले कि हामी तपाइँलाई भन्यौं कि हामी तपाइँलाई कसरी एक वाटरमार्क हटाउने सिकाउन जाँदैछौं। तर यो पनि कि हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ यो अरु कसैको काम चोरी गर्ने उद्देश्य संग नगर्नुहोस्। त्यसोभए अनब्रान्डि legal कानूनी हो वा होइन?
उत्तर त्यति सरल छैन जति तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ। र यो उद्देश्य को लागी तपाइँ त्यो छवि संग छ मा निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँ यसलाई मेटाउनुहुन्छ किनकि तपाइँ यसलाई व्यक्तिगत उद्देश्यहरु को लागी प्रयोग गर्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ (उदाहरण को लागी, एक टी शर्ट बनाउने, तपाइँको कोठा मा एक पोस्टर लगाउने, आदि) तब त्यहाँ सामान्यतया यसको साथ कुनै समस्या छैन। अब, के हुन्छ यदि एक टी शर्ट बनाउन को सट्टा के तपाइँ के चाहानुहुन्छ कि चित्र को मार्केट गर्न को लागी कि उनीहरु टी शर्ट बनाउन सक्छन् र तपाइँ देखाउन सक्नुहुन्छ? के हुन्छ यदि तपाइँ यसलाई एक विश्व पोस्टर को कवर को लागी, वा एक किताब को कवर को लागी जाँदै हुनुहुन्छ? त्यहाँ पहिले नै एक छवि छ कि तपाइँको छैन बाट लाभ को लागी एक इरादा छ, र त्यो तपाइँलाई समस्या मा राख्न सक्नुहुन्छ किनकि लेखक आफैंले तपाइँको छवि को उपयोग को लागी उसको प्राधिकरण बिना (र यसको लागी भुक्तानी बिना) मुकदमा गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी एक वाटरमार्क हटाउन
अर्को हामी तपाइँ धेरै को उदाहरण दिन जाँदैछौं वाटरमार्क हटाउन सक्ने कार्यक्रमहरु र तपाइँलाई एक छवि को साथमा प्रस्तुत गर्नुहोस् कि ब्रान्ड संग एक को रूप मा उस्तै हुनेछ, तर यो बिना।
यो Apowersoft उपकरण सरल र प्रयोग गर्न सजिलो को एक हो। यो धमिलो र स्मूथिंग मा आधारित छ ताकि वाटरमार्क अब छविहरुमा देखिने छैन।
प्रक्रिया धेरै सरल छ:
तपाइँ उपकरणमा छवि अपलोड गर्नुहोस्।
तपाइँ क्षेत्र जहाँ वाटरमार्क छ छाया।
तपाइँ यसलाई रूपान्तरण गर्न दिनुहुन्छ। उपकरण तपाइँ केहि गर्न को लागी बिना स्वचालित रूप बाट काम शुरू हुनेछ। सेकेन्ड को एक मामला मा यो तपाइँ वाटरमार्क बिना छवि प्रदान गर्दछ।
अर्को विकल्प तपाइँ, धेरै सजीलो र छिटो प्रयोग गर्न को लागी, यो हो। यो गर्न को लागी, तपाइँले गर्नु पर्छ:
कार्यक्रम को वाटरमार्क संग छवि अपलोड गर्नुहोस्।
भाग चयन गर्नुहोस् जहाँ वाटरमार्क स्थित छ।
मेटाउनुहोस् बटन थिच्नुहोस्। चिन्ता नगर्नुहोस्, यो त्यो बक्स मेटाउने छैन, तर यो छवि को बरकरार छोडेर यो मेटाउने को ख्याल राख्नेछ।
हामी तपाइँलाई भन्न सक्दैनौं कि यो सही हुन गइरहेको छ, किनकि कहिले काहिँ यो सत्य हो कि त्यहाँ एक सानो धब्बा हुन सक्छ कि, जान्दथे कि त्यहाँ केहि थियो, तपाइँ दृष्टिमा धेरै स्तब्ध हुनेछ। तर यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि यो नराम्रो देखिन्छ, तपाइँ अन्य कार्यक्रमहरु को प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
फोटोशप संग एक वाटरमार्क हटाउनुहोस्
संसारमा सबैभन्दा राम्रो ज्ञात छवि सम्पादन कार्यक्रमहरु मध्ये एक Photoshop हो। र जाहिर छ कार्यक्रम पनि तपाइँ वाटरमार्क हटाउन को लागी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। के कदम चाल्ने? नोट लिनुहोस्:
कार्यक्रममा छवि अपलोड गर्नुहोस् ताकि यो यसको साथ खुल्छ।
नीलो ब्रश उपकरण चयन गर्नुहोस्।
भरण विकल्प को रूप मा "सामग्री मा आधारित" चयन गर्नुहोस्।
अब ब्रश को मोटाई परिमार्जन गर्नुहोस् र वाटरमार्क के मा चित्रकला शुरू गर्नुहोस्। एकचोटि तपाइँ यसलाई रिलीज गर्नुहुन्छ, तपाइँ देख्नुहुनेछ कि वाटरमार्क गायब हुन्छ मात्र ठाउँ छोडेर जहाँ यो थियो।
हो यो सत्य हो कि यो केहि हद सम्म धमिलो हुन सक्छ, तर त्यो ब्रान्ड भन्दा राम्रो छ।
अर्को कार्यक्रम कि तपाइँ वाटरमार्क हटाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Teorex बाट यो एक हो। यो गर्न को लागी, चरणहरु निम्न छन्:
कार्यक्रम संग छवि खोल्नुहोस्।
«बहुभुज Lasso» उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। यसको साथ तपाइँ सम्पूर्ण क्षेत्र जहाँ वाटरमार्क स्थित छ चयन गर्न छ। यदि यो धेरै ठूलो छ यो धेरै राम्रो छ यो दुई वा धेरै भागहरु मा गर्न को लागी ताकि तपाइँ यसलाई धेरै पिक्सेल संग भर्न को लागी छैन किनकि त्यो तरीकाले तपाइँ एक राम्रो परिणाम हुनेछ।
एकचोटि तपाइँ यसलाई चयन गर्नुभयो, एक रातो बक्स देखा पर्नेछ। तपाइँ "मेटाउनुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस् ताकि कार्यक्रम वाटरमार्क हटाउने ख्याल राख्नेछ।
बाँकी छ कि सबै नतिजा बचत गर्न को लागी हो।
यो एक छ सबै भन्दा राम्रो उपकरण अंक हटाउन, तेसैले यदि तपाइँ चाल छ कि हामी तपाइँलाई दिएका छौं, तपाइँ एक परिणाम पाउनुहुनेछ कि मूल बाट धेरै फरक पर्दैन।
यदि तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर मा कुनै पनी प्रोग्राम स्थापना गर्न चाहनुहुन्न र तपाइँ अरुलाई तपाइँको लागी यो हटाउने हेरचाह गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ धेरै अनलाइन उपकरणहरु छन् कि तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ती मध्ये एक Fotoefectos, एक अनलाइन वाटरमार्क हटाउने हो।
तपाइँले लिनु पर्ने कदमहरु छन्:
वेब पेज खोल्नुहोस्।
फोटो अपलोड गर्नुहोस्।
उहाँलाई भन्नुहोस् कि तपाइँ के गर्न चाहानुहुन्छ। यस अवस्थामा, तपाइँ के गर्नु पर्छ संकेत छ कि तपाइँ वाटरमार्क हटाउन चाहानुहुन्छ।
यदि तपाइँ अर्को क्लिक गर्नुहुन्छ, यो तपाइँ सोध्न को लागी क्षेत्र जहाँ वाटरमार्क तपाइँ हटाउन चाहानुहुन्छ संकेत गर्न को लागी हुनेछ। हटाउनुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् र सेकेन्ड मा तपाइँ डाउनलोड को लागी तयार परिणाम हुनेछ।
त्यहाँ छन् अधिक विकल्पहरु कि तपाइँ जसको परिणाम राम्रो वा नराम्रो गुणस्तर को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। छवि आफैंमा पनि प्रभावित हुनेछ। तेसैले यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि परिणामहरु तपाइँलाई आश्वस्त गर्दैनन्, हार नदिनुहोस् र वाटरमार्क हटाउन को लागी अन्य उपकरणहरु को प्रयास गर्नुहोस् र यो नोटिस नगर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » वाटरमार्क हटाउनुहोस्
कसरी तपाइँको किताब को अगाडि र पछाडि आवरण बनाउन को लागी